UKoffi Olomide wenza isambulo esibalulekile ngobuhlobo bakhe ne-Innoss'B - teles
Inkosi yaseCongo yaseRumba ibiyisivakashi sombhali wezindaba uNty Lokole ngoLwesibili, Julayi 28, 2020. Ithuba likaKoffi Olomide ukwenza isambulo esibalulekile ngobuhlobo bakhe no-Innoss'B, umculi odumile wobuciko obusezingeni eliphezulu "Yo pe ".
Kusuka egunjini lezinganekwane "I-Paris la Défense Arena" lapho ikhonsathi yakhe ezoba ngoFebhuwari 13, 2021 izokwenzeka, uKoffi Olomidé noNaty Lokole baxoxa ngezihloko eziningana. Mayelana nabaculi abasebancane abangamenyelwa kulo mkhakha wesigaba.
Ngemuva kokuthi u-Antoine Agbepa alias Koffi akhulume ngegama likaGally Garvey, Abdalah noGaz Fabilous. Uzakwethu wambuza ukuthi ngabe u-Innoss'B naye uzobe ekhona yini.
"U-Innoss akuyona ingane yami encane, uyindodana yami", U-Olomide uthole iziqu ngaphambi kokungeza, “Umuntu owenza izingoma zami ngumfowabo omkhulu u-Djizzo. Uyindodana, ungithumelele nomyalezo namhlanje. Angikwazi ukumthatha njengeklayenti, kodwa njengendodana ”
“Ngabe usubonile ukuthi ufundile kangakanani iCongo ngokubukwa okungaphezulu kwezigidi eziyi-100. Ngakho-ke, angazi ukuthi ngithini ”, uncome ubuhle boMholi oMncane, uKoffi Olomide.
Ngaphezu kwalokho umphathi umphathi weQuartier Latin akazange acacise ukuthi lowo acabanga ukuthi indodana yakhe uzobizelwa ekhonsathini yakhe ehlonishwa kakhulu ngoFebhuwari 2021.
Silinde ukubona ukuthi inkosi yaseCongo yama-rumba izokuba nomusa ngokwanele yini ukwakha ibhuloho legolide phakathi kwesizukulwane esidala nesizukulwane esilandelayo.
Le ndatshana yavela okokuqala ku-: https://afriqueshowbiz.com/koffi-olomide-met-les-points-sur-les-i-innossb-nest-pas-mon-petit-il-est-mon-fils/
I-LIVE Transfer Talk: I-Barca's Suarez inikele kusuka ku-MLS 'Inter Miami